चीन–तिब्बतः के तिब्बत चीनकै भूभाग हो? | पहिलो बोली
चीन–तिब्बतः के तिब्बत चीनकै भूभाग हो?
स्वतन्त्र तिब्बत चाहँदै गरिएको आन्दोलनको तस्विर/ स्रोतः History.com
लद्दाखस्थित गलवान उपत्यकामा भारत र चीनका सैनिकको बिचमा भएको हिसांत्मक झडपभन्दा तीन वर्ष पहिले दुई देश डोकलाम क्षेत्रमा पनि आमनेसामुन्ने भएका थिए । भारत–चीन सिमा विवादको दायरा लद्दाख, डोकलाम, नाथूलाबाट हुँदै भारतको अरुणाचल प्रदेशको तवांग उपत्यकासम्म पुग्छ ।
तवांग उपत्यकालाई तिब्बतको हिस्सा मानिन्छ । र भनिए अनुसार, तिब्बत र तवांग क्षेत्रको बिचमा निकै सांस्कृतिक समानताहरु छन् । अर्कातिर, तवांग बौद्ध धर्मालम्बीहरुको प्रमुख धर्मस्थल पनि हो । दलाई लामाले तवांगमा भएको एक गुम्बाको भ्रमण गर्दा चीनले निकै विरोध गरेको थियो । कतिसम्म भने गत वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अरुणाचल प्रदेशको भ्रमण गर्दा चीनले उनको भ्रमणको औपचारिक रुपमा नै विरोध गरेको थियो ।
चीनले तिब्बत क्षेत्र मात्रै नभएर भारतको अरुणाचल प्रदेशको क्षेत्रलाई पनि आफ्नो हो भन्ने आशयमा यसलाई दक्षिणी तिब्बत भन्ने गरेको छ । अरुणाचल प्रदेशमा चीनसँग ३ हजार ४ सय ८८ किलोमिटर लामो सिमाना रहेको छ ।
चीनले तिब्बतलाई सन् १९५१ मा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो, जबकी १९३८ मा बनाईएको मैकमोहन लाइनका अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारतको हिस्सामा पर्छ ।
मुख्यतः बौद्ध धर्म मान्ने मानिसहरुको लागि यो ठाउँ ‘संसारको छत’ समेतको नामले चिनिन्छ । चीनमा भने तिब्बतको दर्जा एक स्वशासित क्षेत्रको रुपमा छ । चीनको अनुसार यो क्षेत्रमा इतिहासको लामो समय देखि नै चीनको सम्प्रभुता रहेको छ । जबकी तिब्बती मानिसहरुले आफ्नो इमान्दारी देश निकाला गरिएका अध्यात्मिक नेता दलाई लामा प्रति देखाउने गरेको पाईन्छ । दलाई लामालाई उनका अनुयायीहरुले एक जीवित ईश्वरको रुपमा मान्छन् । अर्कातिर, चीनले भने उनलाई अलगाववादी तत्वको रुपमा मानेको थियो ।
तिब्बतको इतिहास निकै उथल पुथलले भरिएको छ । कहिले आफैं स्वशासित क्षेत्रको रुपमा रहेको छ भने कहिले मंगोलिया र चिनको हुकुममा शासित रहेको छ । तर, सन् १९५० मा चीनले आफ्नो झण्डा लहराउन हजारौं सैनिक यो क्षेत्रमा पठाएको थियो । तिब्बतका केही ठाउँलाई स्वशासित ठाउँको रुपमा राखियो भने बाँकी क्षेत्रलाई चीनको प्रान्तको रुपमा मिलाईयो ।
सन् १९५९ मा चीन विरुद्ध तिब्बतमा विद्रोह सुरु भयो । असफल विद्रोहपछि १४ औं दलाई लामालाई तिब्बत छोडि भारतमा शरण लिनु परेको थियो, जहाँ उनले निर्वासित सरकार गठन गरेका थिए । ६० र ७० को दशकमा चीनको सांस्कृतिक क्रान्तीको क्रममा तिब्बतका धेरै बौद्ध विहारहरु नष्ट भएका थिए । भनिन्छ, यो क्रममा दमन र सैनिक शासनका कारण हजारौं तिब्बती मानिसहरुको ज्यान समेत गएको थियो ।
चीन र तिब्बत विवाद कहिले सुरु भयो?
चीन र तिब्बत बिच विवाद तिब्बतको कानुनी स्थितिको कारणले भईरहेको छ । चीनका अनुसार तेह्रौं शताब्दीको मध्यदेखि नै तिब्बत चिनको हिस्सा थियो । तर, तिब्बती मानिसहरु भने तिब्बत कैयौं शताब्दीदेखि एक स्वतन्त्र राज्यको रुपमा रहेको र यसमाथि चीनको कुनै पनि किसिमको अधिकार नभएको बताउँछन् ।
मंगोल राजा कुबलाई खानले राजवंशको स्थापना गरेपछि तिब्बत मात्रै नभएर चीन, भियतनाम र कोरियासम्म आफ्नो राज्य विस्तार गरेका थिए । पछि १७ औ शताब्दीमा चीनको चिङ्ग वंशसँग तिब्बतको सम्बन्ध स्थापित भएको थियो । २६० वर्षको नातापछि चिङ्ग वंशका सेनाले तिब्बतमाथि आफ्नो अधिकार जमाएका थिए । तर, तीन वर्षमा नै तिब्बतीहरुले उनीहरुलाई खेदाएका थिए । सन् १९१२ मा १३ औं दलाई लामाले तिब्बतको स्वतन्त्रताको घोषणा गरेका थिए । तर, फेरि सन् १९५१ मा चिनियाँ सेनाले तिब्बतमा आफ्ने नियन्त्रण गरेको थियो, र एक सन्धीमा हस्ताक्षर गराएको थियो, जसले गर्दा तिब्बतको प्रभुसत्ता र स्वतन्त्रता चिनलाई सुम्पिनु पर्यो । त्यहि बेलादेखि निर्वासित भएका दलाई लामा भारत गएर फेरि तिब्बतको स्वतन्त्रता फर्काउन संघर्ष गरिरहेका छन् ।
के तिब्बत चिनको हिस्सा हो?
चीन र तिब्बतसँग जोडिएर थुप्रै प्रश्नहरु छन् । के तिब्बत चिनको हिस्सा हो? चीनले नियन्त्रणमा लिनु अघि तिब्बत कस्तो थियो? त्यसपछि के के परिवर्तन भयो? तिब्बतको निर्वासित सरकारका अनुसार, ‘यो कुरामा कुनै विवाद छैन, इतिहासको अलग अलग कालखण्डमा तिब्बत विभिन्न विदेशी शक्तीको प्रभावमा रहेको थियो । कहिले मंगोल, कहिले नेपाली गोर्खा, कहिले चीनका मन्चु राजवंशको शासन त कहिले भारतको शासन गर्ने अंग्रेज । कुनै समय यी सबैसँग तिब्बतले आफ्नो भूमिका खेलेको छ । इतिहासकै अर्को कालखण्ड पनि छ जहाँ तिब्बतले आफ्नो छिमेकीलाई दवाब र प्रभाव पारेको थियो, र ति देशहरुमध्ये एक चीन पनि थियो ।
अहिले दुनियाँमा कुनै यस्तो देश भेट्टाउन मुस्किल छ, जहाँ कुनै न कुनै समयमा अन्य विदेशी देशको प्रभाव वा अधिपत्थ्य नपरेको होस । तिब्बतको सन्दर्भमा पनि विदेशी प्रभाव रहेको थियो, तर निकै कम समयको लागि मात्रै । तर, चीनको भने सात सय वर्षभन्दा धेरै समयदेखि तिब्बतमा चीनको शासन भएको तर्क छ । तिब्बतलाई कहिले कुनै पनि देशले स्वतन्त्र देशको रुपमा मान्यता नदिएको चीनको तर्क रहेको छ ।
–यो लेख बीबीसी हिन्दीमा छापिएका सामग्रीहरुको आधारमा तयार गरिएको हो ।